DHEGEYSO-Beelaha gobolka Sanaag oo shir uga furmayo Badhan. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Beelaha gobolka Sanaag oo shir uga furmayo Badhan.
Luulyo 27, 2016 12:38 b 0
Badhan, July 27 2016–Magaalada Badhan ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxaa dhowaan shir uga furmayaa beelaha dega gobolkaasi, kuwaasi oo ka arrinsan doona arrimaha gobolka Sanaag iyo midnimada beelaha dega gobolkaasi.
Afhayeenka Isimada Puntland Garaad Cabdullaahi Cali Ciid, oo maalinimadii shalay isaga iyo wafti duubab dhaqan ah oo uu hogaaminayey ay gaareen Badhan ayaa sheegay in shirkaasi looga hadli doono midnimada beelaha iyo ilaalinta xuduudaha gobolka.
DHEGEYSO-Shacabka Puntland oo soodhoweeyey guushii xulka Puntland.